FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA GOBERIAN - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Goberian
Alika mifangaro Golden Retriever / Siberian Husky
'Nalaiko teo an-tampon-tampontrano tao an-tranon'ny dadatoako ity sarin'alikao Mimi ity. Ity no Goberianina 1 taona ahy. Mahafinaritra fotsiny izy ary tena mangina. '
Ny Goberian dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Golden Retriever ary ny Husky Siberia . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra eo amin'ny hazofijaliana ary mahafantatra fa afaka mahazo mitambatra amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Furbee ny Goberian volamena (Husky / Golden Retriever mix) amin'ny 4 taona any ivelan'ny tokotanin-tsambo
Furbee ny Goberian volamena (Husky / Golden Retriever mix) amin'ny 4 taona ao an-trano
Furbee ny Goberian volamena (Husky / Golden Retriever mix) amin'ny 4 taona mandry amina antontany.
Miya ilay Goberian fotsy sy manga, maso (Golden Retriever / Siberian Husky mix) toy ny alika kely amin'ny 4 volana mitsangana eo ambonin'ny vatolampy
Miya ilay Goberian fotsy sy manga, maso (Golden Retriever / Siberian Husky mix) ho alika kely amin'ny 4 volana mandry ao an-trano
'I Leon ity. Goberian izy, midika izany fa AKC Siberian Husky no vadiny ary AKC Golden Retriever no tohodranony. Ben dia nihazakazaka teny amoron-dranomasina saika isan'andro ary saika ny olona rehetra mifanena aminy dia manontany hoe inona no karazana alika izy ary milaza hoe tsara tarehy sy tsara fanahy amin'izy ireo izy. Tena marani-tsaina izy ary tsy nandany fotoana akory ny fampivoarana azy tao an-trano. Ankehitriny izy dia miasa amina arsenal feno fitaka. '
asehoy ahy ny sarin'ireo mpanamboatra irlandey
Lehiben'ny gozeriana mainty, mainty ary fotsy Goberian (fifangaroan'ny Golden Retriever / Husky) ho alika kely tokony ho 15 herinandro— 'Izy dia iray amin'ireo alika kely valo ary iray amin'ireo zazalahy roa. Izy no voalaza fa lehibe indrindra tamin'ny fako. Manodidina ny 35 lbs izy. izao dia izao. Manana ny fizahana faha-16 volana azy ny faha-15. Liana aho mahita ny habetsahan'ny fitomboany tao anatin'ny iray volana. Alika malemy fanahy izy. Tena marani-tsaina koa izy. Niofana mora foana izy, trano ary amin'ny ankapobeny. Ny reniny dia Golden Retriever iray taona ary ny dadany dia ilay Siberian Husky. Samy olon-tsotra avokoa izy roa. Molly no anaran-dreniny ary Smokey ny dadany. Volon-koditra daholo i Neny ary ny dadany dia volontsôkôlà, fotsy volo ary fotsy. '
Lehiben'ny goba mainty, mainty ary fotsy Goberian (fifangaroan'ny Golden Retriever / Husky) ho alika kely eo amin'ny 15 herinandro eo ho eo
Fred ny Golden Retriever / Siberian Husky mix (Goberian) any ivelany ao anaty lanezy
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Goberian
Sarin'i Goberian 1
Lisitry ny alika mipoitra Siberia Husky Mix
Lisitry ny alika mifangaro Golden Retriever mifangaro
pitbull terrier Labrador retriever afangaro
karazana alika manomboka amin'ny r
min pin fox terrier mix
Lanja pitbull 6 volana
jack russell afangaro amin'ny tertera voalavo